Ngokwenyani abantu bafanele baziphathe ngcono kwiMithombo yeendaba yoLuntu | Martech Zone
Kwinkomfa yamva nje, bendinengxoxo kunye nezinye iinkokheli zemidiya yoluntu malunga nemozulu engafanelekanga ekhula kwimidiya yoluntu. Akuninzi malunga nokwahlukana ngokubanzi kwezopolitiko, okucacileyo, kodwa malunga nokunyanzeliswa komsindo ohlawula nanini na xa kuvela ingxaki.
Ndilisebenzise igama ukungxama kuba yile nto siyibonayo. Asisayi kuze siyeke ukuphanda umba, silinde iinyani, okanye sihlalutye imeko yemeko. Akukho mpendulo, kodwa inemvakalelo kuphela. Andikwazi ukunceda kodwa ndicinge ngeqonga lanamhlanje leendaba zosasazo njengeColosseum enesikhalo esivela kwisihlwele ngoobhontsi phantsi. Umntu ngamnye onqwenela ukujolisa kumsindo wabo aqwengwe atshatyalaliswe.
Ukutsiba kukugxothwa ekuhlaleni kulula kuba singamazi ngokwasemzimbeni umntu, okanye abantu abasemva kophawu, okanye sinentlonipho yamagosa aseburhulumenteni avotele eofisini ngabamelwane bethu. Okwangoku, akukho kulungiswa komonakalo owenziwe ngumhlambi… nokuba umntu ebefanelekile okanye hayi.
Umntu othile (ndinqwenela ukuba ndikhumbule ukuba ngubani) owacebisa ukuba ndifunde Ke Ube neentloni ekuhleni, NguJon Ronson. Ndiyithengile incwadi ngalo mzuzu kwaye bendiyilindile ekubuyeni kwam kuhambo. Umbhali uhamba ngamashumi amabini okanye amabali malunga nabantu ababehlazekile esidlangalaleni, ngaphakathi nangaphandle kwemithombo yeendaba zentlalo, kunye neziphumo ezihlala zihleli. Umphumo weentloni mhle kakhulu, nabantu befihla iminyaka kwaye nabambalwa baphela nje ubomi babo.
Ungathini ukuba umhlaba ubusazi okona kubi ngawe? Yeyiphi eyona nto ungazange wayithetha emntwaneni wakho? Yeyiphi eyona ngcinga yoyikekayo onayo ngeqabane lakho? Yeyiphi eyona joke inemibala owakha wahleka okanye wayixelela?
Njengam, mhlawumbi unombulelo umhlambi awusoze ufumane ukubonakala kwezi zinto ngawe. Abantu bonke baneempazamo, kwaye uninzi lwethu luphila ngokuzisola nokuzisola ngenxa yezenzo esizenzileyo kwabanye. Umahluko kukuba ayinguye wonke umntu okhe wajongana nehlazo eluntwini lezinto ezimbi esizenzileyo. Enkosi kulungileyo.
Ukuba thina zaye iveziwe, singacela uxolo kwaye sibonise abantu indlela esizilungise ngayo ngobomi bethu. Ingxaki kukuba umhlambi wawuhamba kudala xa sitsibela kwimakrofoni. Lihambile ixesha, ubomi bethu bunyathelwe. Kwaye unyathelwe ngabantu abangasenazimpazamo okanye ngaphantsi kunathi.
Mabususwe kubo bonke ubukrakra, nomsindo, nengqumbo, nengcolo, nonyeliso, ndawonye nolunya lonke. Yibani nobubele omnye komnye, nibe nemfesane kakhulu, nixolelane, njengokuba naye uThixo wanixolelayo ekuKristu. Kwabase-Efese 4: 31-32
Ukuba siza kuqhubeka sihamba ngale ndlela, kuya kufuneka sibengabantu abangcono. Kuya kufuneka sifune ukuxolelana ngokukhawuleza njengoko sifuna ukutshabalalisana. Abantu abaqhelekanga, kwaye akufuneki sigwetywe njengokulungileyo okanye okubi. Kukho abantu abalungileyo abenza iimpazamo. Kukho abantu abangalunganga abajika ubomi babo baba ngabantu abamangalisayo. Kufuneka sifunde ukulinganisa izinto ezilungileyo ezikhoyo ebantwini.
Elinye ilizwe liyoyikeka apho izitampu zixhaphake khona kwaye sonke siyazimela, silele okanye sibethwe. Ihlabathi apho singazami ukuthetha ngeengqondo zethu, ukuxoxa ngeziganeko ezinempikiswano, okanye ukuveza iinkolelo zethu. Andifuni abantwana bam baphile kwihlabathi elinje.
Enkosi kuJon Ronson ngokwabelana ngale ncwadi ibalulekileyo.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lokudibana laseAmazon kwesi sithuba.
tags: umanyanisoumsindoukuxambulisananemfesaneisinciphisoKwabase-EfesexoleloImvula enkulu kaJonBubeleububiincwadi yentengisoiyavuthandineentloniukuhlazisaukunyelisabuhlunguukungxama
Iingcebiso ezi-5 zokuphucula amava akho e-imeyile eeholide ngo-2017